-डिल्ली राम अम्माई, बेल्जियम
"....बैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन हामीले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषको कार्यन्वयन हामीले दुई बर्ष अगाडी गर्न चाहेका थियौं । तर, त्यसमा सरकारको सहभागीताका बिषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा त्यसको कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन ,... " भनेर गैरआवासीय नेपाली संघको दशौं युरोपेली क्षेत्रीय वैठकलार्इ सम्बोधन क्रममा संगठनको दुख र पिडा मिश्रित अनुभब पस्कनु भएको छ एनआएएनए अध्यक्ष शेष घलेले । जसले हामीलाई बेल्जियमको क्रममा भएका अक्षयकोसका प्रतिबद्धताबारे लाजमर्दो तस्विर सम्झन बाध्य बनाउछ । बेल्जियममा पनि प्रेम गुरुङको कार्यकालमा कल्याणकारी कोषको निर्माण भएको हो । ४० हज्जार युरोको बजेट रहेको उक्त कोष उनको कार्यकालको अन्त्यमा नै मृत घोषित भयो । त्यसको पारदर्सिता समाजले माग्यो मागेन , वा सम्बन्धित पक्षबाट त्यो सुचना दियो दिएन ? त्यसको दायित्वबोध सम्बन्धित संगठनले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? सवाल गम्भीर रुपमा पैदा भएको छ । त्यो अनौपचारिक रुपमा समाप्त प्राय भयो , कसैले उत्तरदायित्व बहन गरेन, सडकमा धुलो झार्न भएपनि औपचारिक रुपमा कसैले सुचना मागेन । अब त्यसको अवस्था हामीले बुझ्ने पर्छ , र सम्बन्धित अभियान प्रमुखसंग त्यसको जिबन या मृत्युबारे प्रश्न सोध्नै पर्छ । http://kantipur.ekantipur.com/news/2014-01-06/381994.html
साधारण सदस्य वा सामाजिक अभियान्ता सबैलाई ज्ञात होस् - हामीलाई यो सोध्ने अधिकार कानुनत प्राप्त छ । आर टि आइ सम्बन्धि कानुनले त्यो अधिकार दिएको छ । कोहि हच्किनु पर्दैन ! हामी सबै नेपाली तथा गैह्र आबासिय नेपालीलाई आर.टी.आई. दर्ता गरेर कुनै पनि नेपाली नागरिकले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी वा सम्बन्धित सार्वजनिक संगठनसंग सरोकार आवश्यक बिषयमा सूचना माग गर्नुको कारण खुलाई, यो बिषयमा सूचना पाऊँ भनि औपचारिक निवेदन दर्ता गर्न पाइने अधिकार नेपाल लगायत युरोपियन कानुनले मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूति गरेको छ । ऐन बमोजिम सूचना अधिकारीले तत्कालै उक्त्त सूचना उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति भए तत्कालै, अन्यथा निवेदन दर्ताको मितिले १५ दिनभित्र निवेदकले मागेकै स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यदि १५ दिनभित्र पनि आवश्यक सूचना दिएन वा दिन चाहेन वा दिएको सूचनामा निवेदकलाई चित्त बुझेन भने निवेदकले सात दिन भित्र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई वा प्रमुख न्यायिक अधिकारीलाई व्यहोरा खुलाई उजुरी दिनसक्ने ब्यवस्था छ । यसबाट पनि निवेदकले चित्त बुझ्दो सूचना पाएन भने ३५ दिनभित्र हुलाक वा प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय सूचना आयोग वा निकायमा पुनरावेदन गर्न सकिने ब्यवस्था छ, जसले सम्पूर्ण व्यहोरा बुझी पुनरावेदनको मितिले ६० दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारी वा संस्थाको प्रमुखलाई आवश्यक आदेश वा कारवाही गर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
"....सधैभरी भावनाको डोरीले बाँधेर मात्रै हामीले अघि सारेका लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने रहेछ । हाम्रो संस्थालाई सबल र नेपालको सम्बृद्धिसँग सहकार्य गर्न सक्नेगरी क्षमतायुक्त नबनाइ अब हामी सम्बृद्धिको साझेदार बन्ने लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैनौं । त्यस्तो सबल संस्था बन्न हामीसँग सही संरचना र सही दृष्टिकोण चाहिन्छ ।...." शेस घलेले खाँटी कुरो कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रममा बोल्नु भएछ । कुरो त्यहि सत्य हो । आफ्नो र महासचिब बिचको टकराबले पनि उहाँलाई निरास बनाएको हुन सक्छ । रास्ट्रीय रुपमा चर्केको बिबादले राम्रो संकेत गरेको देखिदैन । "एनआरएन अमेरिकाका लागि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी डा केशव पौडेल र गौरी जोशीबीच अहिले स्पष्ट रुपमा दुई समूह देखिएको छ। डा.पौडेल समूह आफ्नो पुरा शक्तिको प्रयोग गर्दै जोशीलाई यस निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागी अयोग्य साबित गर्न कम्मर कसेर लागिपरेको छ। त्यस्तै, एनआरएन आइसिसिका तर्फबाट अमेरिकाका कोर्डिनेटरहरु पनि जोशीलाई पाखा लगाउने कार्यमा खुलेरै लागेका छ्न। यसै तानातानी र षणयन्त्रका बिच अमेरिकामा दर्ता भएको एनआरएनको विधान विपरित जोशीलाई उम्मेदवार दिईएन भने एनआरएन अमेरिका फुटन सक्ने सम्भावना प्रवल छ।"https://setopati.com/global/america/६९४२८ एउटा यो कारण पनि हुन सक्छ त्यस्तै उठेको रकम दुरुपयोग भएर वा बेल्जियम जस्तै परोपकारी कोषहरु हिनामिना र तहस नहस भएर पनि हुन सक्छ । के कारणले हो अध्यक्षले बक्तब्यमा दुखद सुस्केरा हाल्नु भएको रहेछ ।
"...बैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन हामीले स्थापना गरेको कल्याणकारी कोषको कार्यन्वयन हामीले दुई बर्ष अगाडी गर्न चाहेका थियौं । तर, त्यसमा सरकारको सहभागीताका बिषयमा ठोस प्रगति हुन नसक्दा त्यसको कार्यन्वयन हुन सकिरहेको छैन ।.... " भनेर उहाले संगठनको कोष निर्माणबारे नमिठो असन्तुष्टि पस्कनु भाको समेत देखियो । सायद त्यो बेल्जियमतिर पनि सांकेतिक प्रहार होकी भनेर आशंका गर्ने ठाउ छ । बेल्जियममा पनि उहालाई नै साक्षी राखेर प्रेम गुरुङको टिमले कल्याणकारी कोषको निर्माण गरेको थियो । ४० हज्जार युरोको बजेट रहेको उक्त कोष उनको कार्यकालको अन्त्यमा नै मृत घोषित भयो । तर घाटमा लगेर जलाई सकेको अवस्था चाहि छैन । त्यसको पारादर्सिता समाजले माग्यो मागेन , वा सम्बन्धित पक्षबाट त्यो सुचना दियो दिएन ? त्यसको दायित्वबोध सम्बन्धित संगठनले लिनु पर्छ कि पर्दैन ? जनमानस, चन्दादाता र लेखंदासहरुले प्रश्न नगरे पनि सवाल गम्भीर रुपमा युरोप भरि भुसको आगो झैँ सल्केको छ । http://kantipur.ekantipur.com/news/2014-01-06/381994.html
माताहतका शाखाबाट केन्द्रलाई साक्षी राखेर गरिएका गैह्र जिम्मेबार आर्थिक तथा सामाजिक कार्यलाई केन्द्रले चासो लिन पर्ने कि नपर्ने ? अब सर्वसाधारण सदस्यहरुले आवाज उठाउनु न्याय संगत देखिन्थ्यो तर खरानी घसेकाहरु पानीमा भिज्दा असली रुपमा आइ छाडे, रमिता देखाए सम्मेलन सफलताको कोकोहोलो मच्चाउदै घर फर्के, तर सिन्को भाचेनन उठाउनु पर्ने सवालै उठेन ।
जुन उद्यस्य र सपनाका साथ एनआरएनए गठन भएको थियो, त्यसको एक हिस्सा पनि सार्थक बनाउने दौडमा छैन यो संस्था , जुन कुरा क्रमश प्रमाणित हुँदै छ । लागेका आरोपलाई किनारा लगाउन सक्नु पर्ने थियो यो पटकको भेलाले । त्यसले युरोपका नेपालीको माझ एकखालको बिश्वास जगाउने थियो । तर सपना शेस घलेले भनेझै "..सधैभरी भावनाको डोरीले बाँधेर मात्रै हामीले अघि सारेका लक्ष्य हाँसिल गर्न नसकिने रहेछ,..." भने जस्तै भयो ।
गएका प्रतिनिधि र सहभागीहरुमा पनि खासै सफलता र परिबर्तन उन्मुख चेतना र आँट देखिएन । उनीहरुले जनस्तरमा उठेका सवालहरु खोज्न सहास गर्नै पर्ने थियो । यो लथालिङ्ग अवस्थाको जिम्मेवारीबारे रकमी लुटाहा र दलाल आरोपीहरुलाई खबरदारी गर्नै पर्ने थियो । चेतनशील र चेतनहिन दासहरुबीच फरक त देखाउनै पर्ने थियो । स्वभाबत दासहरुले चेतनाको बिस्तार चाहदैनन् , ब्याक्तिगत फाइदा र पैसोमा मात्र उनीहरुको आँखा हुन्छ । बास्तबमा कहाँ, कसरी, के हुँदैछ भन्ने थाहा पाउनु नै चेतनाको विस्तार हुनु हो । तर त्यहा युबराज गुरुङले ".......आखिर किन ब्यक्तिको पछि संस्था र पद्दतिलाई जोखिममा लगिंदैछ ? दशौ युरोपेली बैठकको महत्वपूर्ण समय खर्चेर पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको 'अमेरिका प्रकरण' मा अग्रजहरु नै किन बिभाजित देखिए ? संस्थाको सुदूर भबिश्यका लागि अब प्रत्येक एनआरएनले पृथक, संयमित र गम्भीर ढंगले सोंच्नै पर्ने बेला आएको छ .." भनेर अमेरिकी बिबादबारे मुख खोले पनि युरोपबारे मुख खोल्ने हिम्मत नगरेका हुन् कि ? प्रतिक्रिया भेट्टाउँन सकिएको छैन ।
जहा पनि मानिस कृतिम शक्तिको पछाडी कुदेको देखिन्छ । सुचनाको शक्ति र मानसिक प्रभाबबारे कतिले बुझेर पनि बुझ बचाएका छन् भने कतिले साथि रिसाउने डरले अन्यायलाई रुँदै सिरानी हालेर सुतेका छन् । अर्को कुरा केहि यस्ता छन्, शक्ति केहो भनेर उनीहरुलाई थाहा हुदैन । सुचनाको शक्ति सत्ताको शक्ति भन्दा प्रभावकारी हुन्छ । आधुनिक समयमा सूचनालाई नै शक्ति मानिन्छ र जति बढी सूचनाहरु आम सरोकारवाला जनतासँग पुग्दछ, त्यति नै बढी जनता सशक्त हुन जान्छन् र समाजमा विकृति-बिसंगति न्युनिकरण हुँदै सम्पूर्ण समाज र राज्यमा सुशासन कायम हुँदै जान्छ । त्यसैले सूचनाको हकको प्रयोग गर्नु भनेको चेतनशिल नागरिक, विवेकपूर्ण, सभ्य तथा समृद्ध समाज निर्माणको प्रभावकारी बाटो हो । अब हामीले सुचनाको भरपुर प्रयोग गर्नै पर्ने हुन्छ ।
मेरो अघिल्लो लेखले ठोकुवा गरे झैँ अहिलेको एनआरएनएको युरोपेली भेलाले पनि मिठा शब्दका केहि लाइन घोषणाहरु जारि गर्दै औपचारिकता पुरा गरेको छ । छोटकरीमा भन्दा संस्थागत बिकृति र भुकम्प पिडितको राहतको लागि कम छलफल तर अध्यक्ष र महासचिबको दन्त बजनिमा बढी समय खर्चेर सकियो सम्मेलन ।
महाभुकम्पका पिडितहरुमा राहत पुर्याउने कार्यमा धेर थोर सरिक देखिए पनि ध्रुमुस सुन्तलीको ब्याक्तिगत योगदानको दाँजोमा यो संस्थाको निम्छरो र प्रचारमुखी प्रदर्शनीलाई हेर्दा लाग्छ , यसले डायस्पोराको सानो हिस्सामा रहेका मुठ्ठीभर धनाड्यहरुको मनोरंजन,पुंजिकृत नाफामुलक लगानी र विलासी मनोरन्जनात्मक भ्रमणबाट नयाँ नयाँ चलाख बिजनेस पाटनरहरु खोज्ने शैलीलाई संस्थागत गर्न सफल भएको बाहेक डायस्पोरालाई उत्साहजनक अनुभूति दिएको देखिदैन ।
तैपनि उत्तरहरु भन्दा पनि धेरै प्रश्नहरु लिएर जर्मनीको फ्र्यांक्फ्र्ट सम्मेलनमा युरोपका एनआरएनहरु गएका थिए । गएका साथीहरु सम्मेलन पछि अलिक उज्यालो मुख लिएर फर्किनुको सट्टा उही पुरानै अनुत्तरित चेहरा लिएर फर्केका छन् ।
अर्को कुरा के पनि भन्नै पर्ने हुन्छ भने डायस्पोरामा रहेका केहि धनाढ्यहरुले कालो सेतो धनलाई कानुनी मान्यता सहित नेपाल भित्र्याउन भने यो संस्थाले सहजता प्रदान गरिरहेको आरोपबारे छलफल नै भएनछ । नेपाली नागरिकता त्यागेर बसेका नब धनाढ्यहरुले नेपालमा लगानीको बहाना बनाइ कर छली गरेको आरोप समेत एनआरएनले खेपिरहेको छ, तर सवाल उठेन , किनकि भी आइ पी रिसाएभने नियोजनको साधन प्रयोग गर्छन र धन्दा रोकी दिन्छन , अनिता खेल खत्तम ! सर्वसाधारण डायस्पोराका नेपाली श्रमिकको पहुच स्थापित गर्ने सवालमा सम्मेलनमा बहस पनि हुन पाउदैन भन्ने लागेको थियो भयो त्यहि । (http://tibrakhabar.com/archives/14120) एनआरएनए भबन बनाउन , कुनै प्रोजेक्ट संचालन गर्न वा अन्य परोपकारी कार्यको लागि एन आर एन ए को लोगो र संस्थाको प्रयोजन गरि करोडौको लगानी गरिएको छ र नाफा पनि त्यहि अनुरुप भैरहेको सानिमा बैक लगायत भिआइपी गुथिहरुको बार्षिक नाफाले नै देखाउछ । तर त्यो नाफाबाट संस्थालाई राज्यले दिएको सुबिधा प्रयोग गरेबापत थोरै नाफाको अंश पनि छुट्याइएको छैन । भबन बनाउनको लागि बिजुलीको पोल र डरलाग्दा संरचनामा काम गर्ने डायस्पोराका मजदुरबाट आर्थिक सहयोग निचोरिएको छ । त्यसैले यो संगठन कथित नेपाली पुजिपतिहरुको दरवारको लागि मजदुर निचोर्ने संस्थागत संजाल हो भनेर आरोप लगाउनेलाई चोटिलो जवाफ दिन सकिने अवस्था छैन ।
त्यहि प्रसंगमा एउटा कुरा गरौ एनआरएनएको नेपालमा गरिएको लगानी बारे । नेपाल आर्थिक पत्रकार सेजनका एक पत्रकारको नमिठो भोजन खान सबैलाई नमिठो लाग्ला । उनका अनुशार एनआरएनएको नेपालमा लगानी २९ अर्ब ८५ करोड रुपैया उल्लेख छ । यो मध्ये १७ अर्ब ५३ करोडको मात्र सेवा मुलक लगानी देखिन्छ । तर लगानीले कस्तो सेवा उपलब्ध गराएको हो कुनै विवरण छैन । केहि सेजनका आर्थिक पत्रकारलाई प्रयोग गरेर नक्कली विवरण सार्वजनिक गर्दै धेरै धन भित्र्याउने र थोरै लगानी गर्ने यो परिपाटी हाम्रो र रास्ट्रको हितमा पटक्कै छैन भनेर तर्क गर्ने ठाउ देखिन्छ ।(vishwanews.com /2017 /06 /25739 )
त्यसमा पनि सेवा चाहिने अवस्थाका नेपाली समक्ष कहा सेवा पुगेको छ र ! यो संस्थाको धेरै लगानी राजधानी काठमान्डूमा छ भने त्यसपछि बाग्लुङ्ग, मकवानपुर,कास्की,गोरखा, चितवन,र सिराहा छन् । जहा पनि लगानी ब्याक्तिको छ तर क्वारेन्टाइन नतिरी सुबिधा एनआरएनए मार्फत लिइएको आरोप छ ।
अर्को प्रसङ्ग यो संस्थाका जिम्मेवार केहि ब्याक्तिहरुलाई बेल्जियमको असेण्ट्रा, स्पेन, डेनमार्क लगायतका उत्सब, मेला र भेलाहरुमा मानब ओसार पसारको गम्भीर आरोप लाग्यो । मिडियामा सबै कुराहरु छरपष्ट रुपमा आए । बेल्जियममा त एनआरएनकै निर्देशनमा छानबिन समिति समेत बन्यो र आरोपीलाई दोषी देखिएकोले कारवाही गर्नु पर्ने भन्दै सम्बन्धित संस्थालाई प्रतिबेदन समेत बुझायो । त्यसको बोधार्थ केन्द्रलाई समेत पठायो तर लाज पचेको केन्द्रले कारवाही त के चुइक्क बोल्नेसम्म हिम्मत राखेन र हामी यस्तै यस्तै हौ भन्ने खालको संदेश दियो । केन्द्रले कि आरोपीलाई दोषी करार गरि कारवाही गर्न सक्नु पर्थ्यो कि सफाई दिन सक्नु पर्थ्यो तर केन्द्र लाचार देखियो । गत एनआरएन युरोपियन भेलाले बिबादित यी मुद्दाहरुमा छलफल गरेर निचोडमा पुर्याउन सकेको भए थोरै लाज ढाकिन्थ्यो होला । तर अहिले चुनाबका गुठ उपगुठ बनाउदैमा ठिक्क छ यी ठेकेदारहरुलाई । बिबादित मुद्धाको लागि उनीहरुले फुर्सद नै निकाल्न सकेनन ।
अर्को कुरा छ भुकम्प पिडितको लागि उठाइएको पैसाको मुद्धा । नेपालमा भुकम्प पिडितको बहानामा उठाएको पैसाले युरोपतिर घर किन्ने र नेपालमा सम्पत्ति जोड्नेमा अमेरिका, जर्मनी खुल्ला प्रतिस्प्रधामा आएको देखियो भने बेल्जियम भित्रभित्रै चर्चित बन्यो ।(http://www.onlinekhabar.com/2015/05/281863/ ) बेल्जियमको नेपाली सोसाइटी नामाकरण गरिएको एक नेपाली गैह्र सरकारी संस्थाले यहा पनि झन्डै ३ करोड रुपैया उठाएर त्यसको नेपालमा गरिएको लगानी सार्वजनिक गरेको छैन । समाजले उठाएको जम्मा रकम, बचत वा पठाएको प्रमाण र लगानी गरिएको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरिदा पनि अहिले सम्म आएको छैन । यदि जिम्मेवार मिडिया हाउस वा पत्रकारले विवरण माग्दा गरेको आनाकानीले विभिन्न संका जन्माउनु स्वाभाविक हो । हामीले त्यो संस्थाका जिम्मेबारलाई खुल्ला चुनौती दिएका छौ सार्वजनिक गर्न । हामी सम्बन्धित पक्षलाई पुन सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गर्दछौ । यी सबै गलत आरोपित मनशायहरु हामी एनआरएन भित्र आएको वा ल्याइएका सामाजिक बिचलन हुन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
अर्को प्रसङ्ग यो संस्थाका जिम्मेवार केहि ब्याक्तिहरुलाई बेल्जियमको असेण्ट्रा, स्पेन, डेनमार्क लगायतका उत्सब, मेला र भेलाहरुमा मानब ओसार पसारको गम्भीर आरोप लाग्यो । मिडियामा सबै कुराहरु छरपष्ट रुपमा आए । बेल्जियममा त एनआरएनकै निर्देशनमा छानबिन समिति समेत बन्यो र आरोपीलाई दोषी देखिएकोले कारवाही गर्नु पर्ने भन्दै सम्बन्धित संस्थालाई प्रतिबेदन समेत बुझायो । त्यसको बोधार्थ केन्द्रलाई समेत पठायो तर लाज पचेको केन्द्रले कारवाही त के चुइक्क बोल्ने सम्म हिम्मत राखेन र हामि यस्तै यस्तै हौ भन्ने खालको संदेश दियो । केन्द्रले कि आरोपीलाई दोषी करार गरि कारवाही गर्न सक्नु पर्थ्यो कि सफाई दिन सक्नु पर्थ्यो तर केन्द्र लाचार देखियो । सायद यो एनआरएन युरोपियन भेलाले बिबादित यी मुद्दाहरुमा छलफल गरेर निचोडमा पुर्याउन सके थोरै लाज ढाकिन्थ्यो होला । तर अहिले चुनाबका गुठ उपगुठ बनाउदैमा ठिक्क छ यी ठेकेदारहरुलाई ।
त्यस्तै भुकम्प पिडितको लागि एनआरएनएले युरोप भरि कति आर्थिक सहयोग उठायो ? त्यसको रास्ट्रहरुको अलग अलग र युरोपको सामुहिक बचतबारे छलफल होला भनेर धेरैले आशा गरेका थिए । यो बिषयमा पनि जनमानसमा धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् र त्यसको निराकरण केन्द्रको सहयोगमा युरोपियन समितिले गर्नुपर्ने थियो , तर भएन । त्यो प्रस्न एनआरएनए बेल्जियमको सन्दर्भमा पनि उठिरहेको छ । उसले पनि आफ्नो वेब साइड (http://nrnbelgium.org/index.phpoption=com_content&view=category&id=1&Itemid=४८) मा भुकम्प पिडित राहत प्रारादर्शिताको पूर्ण विवरण दिन सकेको छैन । यहाबाट पठाएको सबै धन केन्द्रिय खातामा दुरुस्त छ वा छैन ? त्यो प्रश्न भेलामा पत्रकार बन्धुहरुले उठाउलान भनेर जनमानसले अपेक्षा गर्यो , तर उठाइएन किनकि धनाड्य अग्रजहरु कै हुण्डिमा बाँचेका मिसन पत्रकारिता गर्ने कार्पोरेटिक मिडिया कर्मी र प्रश्नकर्ता बनेर गएका तर ह्याबी वेटको छायाबाट तर्सेर न्युरो झैँ शिर दोब्र्याएर फर्कने जमातको नै त्यहा बाहुल्यता थियो ।
ठुला मिडिया हाउससंग नजिक हुने र पुँजीपतिहरुको सहयोगमा प्राण धान्न पल्केका मिसन मिडियाको सेल्फ सेन्सरसिप खोर भित्रबाट कुनै मिडिया कर्मीले माथि उठाइएका मुद्धाहरु उठाए हुन्थ्यो भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । तर दलाली र बिकाउ मिडियाकर्मीलाई छानीछानी त्यहा ल्याइएको भन्ने जनमानसबाट उठेको आरोपलाइ पुष्टि गर्ने मात्रै काम भयो, पत्रकार प्रतिपक्ष जस्ता भएनन् सत्ता पक्षको दलाली र भजन- सम्मान मै ब्यस्त देखिए । सधै जस्तै यो पटक पनि त्यस्तै भयो र उनीहरु बिगतका निम्तालु पत्रकार जस्तै कार्पोरेटिक खेताला भएको अनुभबहरुले देखाइसकेको छ । यदि विसंगतिका कुराहरु उनीहरुले उठाउने हिम्मत नै गरेको भए माथिबाट त्यो न्युज नियोजन गरेर प्रकासन गर्ने आदेश हुन सक्थ्यो । अर्को कुरा उपस्थित अधिकतम प्रतिनिधि प्रबेक्षक र बिकाउहरुलाई डायस्पोराका अधिकतम श्रमिकहरुको हैन,मनोनित र निर्वाचित उपल्लो पोस्ट प्राप्त गर्न र कलमको मुखबाट बग्ने रंग बिकाउन कथित ह्याबिवेटको आशिर्वादको जरुरि थियो । त्यहि रुपमा दलाली भाषामा "महान ब्याक्तिहरुबाट महान कार्यक्रमको" भजन गरियो र टिकाटालो गरेर कार्यक्रम सम्पन्न भो ।
त्यो सम्मेलनमा म पनि निम्तालु थिएँ तर गइन । एक भजन लेखकले अनलाइनको बार्षिकोत्सबमा आउनु भनेका पनि थिए । जाउँ कि जस्तो पनि लागेको हो । उपध्रो चासो जागेन । उनीहरुको एउटा बज्ने टिम थियो, आफ्नो ताकत र ल्याकत माथि चढाउन,आदेश कुर्न , अनुनय र बिनय बिसाउन जानुको औचित्य साबित गर्न गाह्रो हुने त्यस्ता सम्मेलनमा नगएकै बेश । त्यहा गएको भएपनि त्यहि पुरानो शैलीको चाकडी सम्मान ,त्यहि बर्ष ब्याक्ति भन्दै सत्ताधारीको सम्मान र आफ्ना लगानीकर्ताहरुको भक्ति भजन बस । के गरेर फर्के त ति महाशयहरुले पनि । बद्रीजी र घलेजिका दुइ गुठहरुको अमेरिकन शीतयुद्ध पढेर आए । मेरो प्रश्न छ आफ्नो कलम र मसि समेत बेचिसकेका .... पत्रकारहरुलाई नेपालबाट आएका खेतालाबाट 'टेबलमुनिको हिसाब र पर्दा भित्रको कथा" पढेर आउने कति पत्रकार छन् ?
कसैको चित्त फाट्ला, फेरी पहिलेकै शैलीमा नेपालबाट बोलाइएका द्रब्य पिडित पाहुना देखेर ङिच्च हास्न मन लाग्ला, भनेरै म त्यहा नगएको हुँ । उथलपुथल हुने निर्णय पनि केहि भएनछ, हुने छाँट पनि थिएन । पत्रकार महासंघ केन्द्रलाई निम्ता नगरी पहिले जस्तै रमाइला निम्तालु आएका रहेछन । ब्याक्ति पुजामा राग भएका माथिका चम्चा साथीसंग कुनै दिन भेट भयो भने मेरो प्रश्न यहि हुनेछ एनआर एन ए युरोपले युरोपमा राम्रा पत्रकारहरु भेट्टाएनछ हैन मित्रहरु ? २००६ देखि युरोपमा छापा पत्रिका चलाएका तेज नेपाली,ओम, लक्ष्मण र केजिनहरु जस्ता सम्पादकहरु पनि थिए युरोपमा । मित्रहरु सम्मान गर्न लायक दसकौ सम्म नेपाली नानीहरुलाइ मातृ भाषा पढाएका गुरुआमाहरु पनि थिए यता तिर ! सुन्नु भो साथीहरु खोज पत्रकारितामा पहिचान बनाएका पत्रकारहरु पनि युरोप तिरै बस्छन , तर भन्नु ब्यार्थ छ । सुबिधा भित्र र बाहिर प्रबिधि सम्पन्नता भित्र र बाहिर,परोपकारी सपना र सम्पन्नताको आडम्बर युक्त रमाइलो भित्र र बाहिर धेरै फरक छ । तपाइहरुबाट यो काम हुने सक्दैन भन्नु बेकार छ ।
एनआरएनएका विकृत पात्रहरु आफ्नो अनुकुल समाचार आए खुसि र अनुकुल नआए दुखि,आक्रोशित,र उत्तेजित हुने कुरा हामीले बिगतमा धेरै पटक भोगी सकेका छौ । तर हामी के कुरामा दृढ छौ भने समाजमा सहि सुचना दिनु मात्र पत्रकारिता हैन , त्यस्तै सकारात्मक संदेश पुर्याउनु मात्र पनि पत्रकारिता हैन । समाजका बिकृति, विसंगतिलाई नंग्याउनु र तिनमा सुधार ल्याउन सम्बद्ध निकाय वा संस्थालाई सचेत गराउनु हो पत्रकारिता । त्यसैले पत्रकारिता पलपलमा जोखिम पूर्ण पेशा हो । आवाज बिहिनहरुको आवाज, भुइँका मान्छेका कुरा , समयको आक्रोश र विद्रोहको स्वरलाई जनजनसम्म पुर्याउनुलाई साँचो अर्थमा पत्रकारिता भनिन्छ। आज कतिपयले यो पेशालाई नाफामुलक उद्योग बनाउदै छन् र औधोगिक मेलाहरुमा प्रदर्शनी गर्दैछन । धेरै तिर यसको मूल मर्मको धज्जी उडाइएको छ र मूल मर्ममा प्रहार गरिएको छ । कतिपयले पत्रकारिता पेशालाई राज्य र आफुलाई त्यसको शासक मान्दारहेछन भन्ने कुरो देखियो त्यो बेलामा ।
उनीहरुलाई एकमात्र सुझाब दिन सकिन्छ , जसको दिमागले परिबर्तनको अनुभूति दिन सक्छ । तर जडहरुलाई के सल्लाह दिने ? उनीहरुको दिमाग राम्रो नराम्रो ,शुन्दर कुरुप ,नैतिक अनैतिक भन्ने सोचहरु सिमेन्टेड जस्तै जड छ । त्यसलाई भत्काउन ठुलो मनो-क्रान्तिको आवस्यकता रहन्छ । केलाई राम्रो केलाई नराम्रो भनेर अगाडि नै बनाइसकेको धारणालाई तुरुन्तै भत्काउने सामर्थ्य राखेनौ भने हामी मिडियाकर्मी त हौला तर हाम्रो यात्रा सुरुङ्ग भित्रको यात्रा मात्रै हुनेछ । त्यसपछि हामीहरुबाट समाजले आस गर्नु बेकार हुनेछ ।
खराबलाई पखाल्न कोहि रिसाउला भनेर साइत कुर्नु हुदैन । मिडिया चेत भनेकै ज्ञान,सुचना,प्रोपोगान्डा र बिज्ञापनको बिचमा हामी कति भिन्नता पाउछौ भन्ने हो । अहिले भैरहेको भैरब जात्रा भित्र केछ रमाइलो सब दुनियालाई थाहा छ । भन्न नसकेको मात्र हो । मेरो त अझै पनि आयोजकहरु संग माग छ डायस्पोराका श्रमिकहरुको पसिनाले सिंचेको ब्यानर प्रयोग गरेर ब्याक्तिगत ब्यापार प्रबर्धन गर्न र इष्ट राख्न अपारदर्शी टावरबाट खेतालाको आयात गर्ने काम बन्द होस् ।
More in this category: « साथीको अध्यक्ष हुने धोको	सन्दर्भ : आक्रमणको वार्षिकोत्सव ,इतिहासको कालो दिन »